जातीय विभेदविरुद्ध एउटा सन्देश ‘बोल देउता’ - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
जातीय विभेदविरुद्ध एउटा सन्देश ‘बोल देउता’
प्रकाशित: ४ बैशाख २०७८, शनिबार
काठमाडौं । समाज परिवर्तनको क्रममा नै छ । समाजभित्र सानो र ठूलो जाति, धनी र गरीबबीचको विभेद पनि कायमै छ । केही प्रयासमा कम हुँदै गए पनि अझै विभेदलाई उचालेर राजनीति गर्नेहरुको पनि कमी छैन । त्यही विभेदविरुद्धको एउटा अभियान स्वरुप सांगीतिक कोसेली लिएर आएका छन् ज्योतिप्रकाश ।
गायक तथा संगीतकार ज्योतिप्रकाशको संगीत र स्वरमा रहेको गीत ‘बोल देउता’को म्यूजिक भिडियोसहित सार्वजनिक भएको छ । चन्द्र भट्टचनद्वारा रचित गीतका शब्दहरुले देउतालाई नै पात्र बनाएर समाजको विभेदलाई प्रस्ट्याउन खोजिएको छ ।
आफैंले बनाएको मूर्ति मन्दिरमा राखेपछि पूजा गर्नसमेत नपाउने कस्तो परिवेश ? आखिर देउता त सबैको हो, समानता मन्दिरभित्र किन हुँदैन भन्ने कथा म्यूजिक भिडियोमा देखाइएको छ । समाजमा कायम रहेको विभेदलाई म्यूजिक भिडियो मार्फत सन्देश दिन खोजिएको छ । म्यूजिक भिडियोको निर्देशन शान्तिप्रियले गरेका छन् । भिडियोमा पत्रकारत्रय माधवराज खरेल, लोकराज अधिकारी र सुमन पण्डितको अभिनय रहेको छ । गोविन्द अन्जानको छायाँकन रहेको भिडियोलाई विकास धमलाले सम्पादन गरेका छन् ।
‘हल्का हल्का लजाएर’ राजेश र करिश्माको रोमान्स
‘सिरानी लाएँ हात फेरी फेरी….’ को कर्भरसङ् बनाउनुस् तीस हजार जित्नुस
शम्भूजित र मञ्जुको ‘गोरखा भर्सेस दोलखा’
सरोजको ‘दुई दिने जीवन’ मा दिपक र पुजा
गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन, कुलपतिमा साहित्यकार सूर्य खड्का
ट्रेण्डिङमा उक्लिँदै राम सिटौलाको शब्द, संगीतमा ‘घुम्न जाऊँ न’
वरिष्ठ गायक एवं संगीतकार प्रेमध्वज प्रधानको निधन